အရိုတစ်လိုင်းယောင်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံးအချစ်ရုပ်ရှင်ကား (၃) ကား - For her Myanmar
ကြည့်ရင်းရိုဖို့ ခေါင်းအုံးတွေ ဖက်လုံးတွေဆောင်ထားဦးနော်
ယောင်းတို့မျှော်နေတဲ့ movie review လေးလာပါပြီ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ stella အကြိုက်ဆုံး အချစ်ဇာတ်ကားလေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးမယ်နော်။ ဘာရုပ်ရှင်တွေလဲဆိုတော့ …
(၁) The Vow
Paige နဲ့ Leo ကအရမ်းချစ်ကြတဲ့ ကြင်စဦးမောင်နှံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်နေ့မှာ ကားမတော်တဆမှုကြောင့် Paige ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေပျောက်ဆုံးသွားပြီး Leo နဲ့မတွေ့ခင်အချိန်တွေကိုသာ မှတ်မိတော့တဲ့အခါ Paige ကိုချစ်တဲ့ Leo ကတော့ သူ့ကိုမှတ်မိလာအောင် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါတော့တယ်။ Paige က Leo ကို ပြန်မှတ်မိလာမှာလား ၊ Leo က လက်လျှော့လိုက်မှာလား ၊ သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်နီးစပ်သွားမလား ဝေးကွားသွားမလားဆိုတာကို “The Vow” မှာ ကြည့်ရမှာပါ။ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားပြီး Rachel McAdams နဲ့ Channing Tatum တို့က အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Related article>>>Comedyနဲ့ Drama အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားရစေမယ့် Friendzone ရုပ်ရှင်
(၂) The Lake House
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဆရာဝန်မတစ်ယောက် ရေကန်ဘေးက အိမ်ကြီးတစ်အိမ်ကို ဝယ်လိုက်မိရာက စတာပဲ။ အိမ်ပြောင်းလာတဲ့နေ့ကစပြီး အရင်အိမ်ရှင်ဗိသုကာပညာရှင်နဲ့ စာပေးစာယူလုပ်မိပါလေရော။ နှစ်ယောက်သားတွေ့ဖို့ချိန်းတော့ ချိန်းတဲ့နေရာကို နှစ်ယောက်လုံးရောက်လာပေမဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့ကြပြန်ဘူး။ ဘာကြောင့်မတွေ့တာလဲ ၊ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ ရေကန်ဘေးကအိမ်ကြီးမှာ ဘယ်လိုဆန်းကြယ်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာကို Sandra Bullock နဲ့ Keanu Reeves တို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ အချစ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကားဖြစ်တဲ့ “The Lake House” မှာ ကြည့်ရူနိုင်ပါတယ်။
Related article>>>ယောင်းကို မျက်ရည်ခြူမယ့် အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် (၃) ကား
(၃) Kissing Booth
Netflix ကနေ ပေါက်သွားတဲ့ “Kissing Booth” ကတော့ လူငယ်ကြိုက်အချစ်ဇာတ်မြူးလေးပါ။ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းရဲ့အစ်ကို Noah ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက အကြီးအကျယ် crush ခဲ့သူ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေး Elle…သူ(မ) ရဲ့ crush ကသူ(မ)ကို ပြန်ကြိုက်လာတဲ့အခါ သူတို့အချစ်လမ်းခရီးက သာယာပါ့မလား ? တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jacob Elordi နဲ့ Joey King က ပါဝင်ထားပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်က လက်တွေ့ဘဝမှာလည်း စုံတွဲတွေဆိုတော့ အရိုဆုံးကားလေးဖြစ်နေမှာပါ။
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေးတွေ ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်။ ပျော်ရွှင်စရာ ရက်သတ္တပတ်လေးဖြစ်ပါစေနော်။
ကွညျ့ရငျးရိုဖို့ ခေါငျးအုံးတှေ ဖကျလုံးတှဆေောငျထားဦးနျော
ယောငျးတို့မြှျောနတေဲ့ movie review လေးလာပါပွီ။ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ stella အကွိုကျဆုံး အခဈြဇာတျကားလေးတှအေကွောငျး ပွောပွပေးမယျနျော။ ဘာရုပျရှငျတှလေဲဆိုတော့ …
Paige နဲ့ Leo ကအရမျးခဈြကွတဲ့ ကွငျစဦးမောငျနှံဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့တဈနမှေ့ာ ကားမတျောတဆမှုကွောငျ့ Paige ရဲ့မှတျဉာဏျတှပြေောကျဆုံးသှားပွီး Leo နဲ့မတှခေ့ငျအခြိနျတှကေိုသာ မှတျမိတော့တဲ့အခါ Paige ကိုခဈြတဲ့ Leo ကတော့ သူ့ကိုမှတျမိလာအောငျ အစှမျးကုနျကွိုးစားပါတော့တယျ။ Paige က Leo ကို ပွနျမှတျမိလာမှာလား ၊ Leo က လကျလြှော့လိုကျမှာလား ၊ သူတို့နှဈယောကျပွနျနီးစပျသှားမလား ဝေးကှားသှားမလားဆိုတာကို “The Vow” မှာ ကွညျ့ရမှာပါ။ ဖွဈရပျမှနျကို အခွခေံထားပွီး Rachel McAdams နဲ့ Channing Tatum တို့က အဓိကသရုပျဆောငျတှအေဖွဈ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။
Related article>>>Comedyနဲ့ Drama အရသာကို အပွညျ့အဝ ခံစားရစမေယျ့ Friendzone ရုပျရှငျ
ဇာတျလမျးကတော့ ဆရာဝနျမတဈယောကျ ရကေနျဘေးက အိမျကွီးတဈအိမျကို ဝယျလိုကျမိရာက စတာပဲ။ အိမျပွောငျးလာတဲ့နကေ့စပွီး အရငျအိမျရှငျဗိသုကာပညာရှငျနဲ့ စာပေးစာယူလုပျမိပါလရေော။ နှဈယောကျသားတှဖေို့ခြိနျးတော့ ခြိနျးတဲ့နရောကို နှဈယောကျလုံးရောကျလာပမေဲ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျမတှကွေ့ပွနျဘူး။ ဘာကွောငျ့မတှတေ့ာလဲ ၊ သူတို့နှဈယောကျလုံးနဲ့ သကျဆိုငျနတေဲ့ ရကေနျဘေးကအိမျကွီးမှာ ဘယျလိုဆနျးကွယျမှုတှရှေိနလေဲဆိုတာကို Sandra Bullock နဲ့ Keanu Reeves တို့ရဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့အတူ အခဈြလြှို့ဝှကျဆနျးကွယျကားဖွဈတဲ့ “The Lake House” မှာ ကွညျ့ရူနိုငျပါတယျ။
Related article>>>ယောငျးကို မကျြရညျခွူမယျ့ အကောငျးဆုံးရုပျရှငျ (၃) ကား
Netflix ကနေ ပေါကျသှားတဲ့ “Kissing Booth” ကတော့ လူငယျကွိုကျအခဈြဇာတျမွူးလေးပါ။ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးရဲ့အဈကို Noah ကို ငယျငယျကတညျးက အကွီးအကယျြ crush ခဲ့သူ ဆယျကြျောသကျကောငျမလေး Elle…သူ(မ) ရဲ့ crush ကသူ(မ)ကို ပွနျကွိုကျလာတဲ့အခါ သူတို့အခဈြလမျးခရီးက သာယာပါ့မလား ? တကျသဈစ သရုပျဆောငျနှဈယောကျဖွဈတဲ့ Jacob Elordi နဲ့ Joey King က ပါဝငျထားပွီးတော့ သရုပျဆောငျနှဈယောကျက လကျတှဘေ့ဝမှာလညျး စုံတှဲတှဆေိုတော့ အရိုဆုံးကားလေးဖွဈနမှောပါ။ကဲ…ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး ဒီတဈပတျပိတျရကျမှာ အခဈြဇာတျကားကောငျးကောငျးလေးတှေ ကွညျ့လို့ရပွီပေါ့နျော။ ပြျောရှငျစရာ ရကျသတ်တပတျလေးဖွဈပါစနေျော။
Tags: #romance, Cinema, flims, Fun, Movies, reviews
Stella March 14, 2019